PHP Mailer Gbanyụọ website na nkeji ọ bụla ị na-agụghị isiokwu a «Ọ BỤ
Okpukpo ajuju nke ndi ozo na-eme ka PHPMailer, ndi mmadu na-acho edepu ederede ederede PHP, ha nwere ike tinye nde mmadu ebe ha na-acho hacking.
Enwere ike ịchọpụta ezughị okè n'ebe onye ọkachamara nchedo aha ya bụ Dawid Golunski Kedu ihe ọzọ ka a ga-esi malite itinye na PHPMailer 5. 2. 18, nke nwere ike ịbụ na a hapụrụ na Saturday. Otú ọ dị, ọ na-apụta na ndị oji nwere ike ịbụ na ha ezughị ezu.
Akwukwo PHPMailer nwere ike jiri ya na nke ozo site na itinye aka na Tom mechara jiri ihe di iche iche nke onsaw na-emeputa ego (CMSs) tinyere WordPress, Joomla Also Drupal. Ebe enweghi ike itinye akwukwo ozo n'oge gara aga, nke di n'ime ha, o ga-enwe ike inweta ihe omuma. N'iji ihe atumatu Okpukpo iche di iche iche nwere ike itinye ya na ndi mmadu ndi ozo.
N'ihi nke a, ụdị osisi camwood ahụ dị iche iche na-amalite site na weebụsaịtị na weebụsaịtị. Dịka ọmụmaatụ, ndị Joomla na-emekọrịta ihe ọnụ na-ekwu na ndị Joomla JMail, nke na-adabere otu ugboro PHPMailer, chọrọ mmezi nhazi ndị ọzọ nke kwadoro na-eme ihe na-adịghị mma.
Ezughị ezughị okè ga-ebute N'elu nkwenye na-ezighị ezi nke ozi adreesị ozi-e nke zipu ozi nwekwara ike ikwe ka onye na-emerụ ihe ga-enye iwu gọọmentị nke nwere ike igbu na sava weebụ na nhazi nke ọrụ sendmail.
Otú ọ dị, mmegbu dị ukwuu na-egbochi ndị na-egosi ihe ngosi weebụ na weebụsaịtị nke ọrụ ọrụ PHPMailer ga-ezipụ ozi E kwekwara ntinye otu ebe email na-ezigara omenala - ọnọdụ nke yiri na site na email header. Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya mgbe usoro nhazi ndị dị otú ahụ dị, na n'ozuzu ihe ngosi weebụ na-eme ka ezipụ ozi zipugoro na ị ga-enye ndị ahịa ikike ịza ozi adreesị ozi-e ha dị ka Onye na-erite uru.
"Mkpịsị niile dị n'etiti Joomla API nke na-eziga mail na-eji adreesị ezigara edozi n'ime ntọala zuru ụwa ọnụ Ọzọkwa na-echeghị ozi ndị ahịa na kwesịrị inwe ohere ịnọ n'ọnọdụ ọzọ," ka Joomla nche cooperation kwuru maka akụkọ. "Otú ọ dị, nkwụsịtụ nke na-ebu Ụdị ọdịiche dị na PHPMailer na-ejikarịghị Joomla API ma zipụ ozi nwere ike ịnweta ohere iji chebe onwe ya ma ọ bụrụ na nke a. ".
The WordPress developers arrived at A comparative conclusion, na-arịba ama na ha onwe ha ahụhụ tracker na esịtidem wp_mail () ọrụ a na-arụ ọrụ na WordPress center koodu nwere ike ọ gaghị emetụta na ya adịghị eji akara ike PHPMailer njirimara. Ihe nkwụnye nke atọ nke na-eji wp_mail () eme ihe n'ụzọ dị irè kwesịrị ikwu na ọ gaghị emetụta ya, ma ọ bụ na ntanetị nwere ike ịnwe ugbu a na nyocha.
"Na-abịa 4. 7. Nbudata 1 ga - ejide ọtụtụ ihe enyemaka maka nsogbu ndị a, "ka onye na-emepụta ihe nkiri WordPress bụ Dion Hulse kwuru. "Anyị na-edozi na naanị mbupu ala ụlọ akwụkwọ maka WordPress - na ihe ọ bụla ikpe ma ọ bụrụ na anyị na-eji njirimara ma ọ bụ. ".
Ndi otu Drupal nche otu a weputara Otu ozi nche maka okwu nke a Gini ka edere ya dika ihe di oke egwu, obu eziokwu na eziokwu Drupal abughi ihe enwere?
"N'iji nlezianya dị ịtụnanya maka mbipụta a na usoro iheomume banyere nnyefe ya anyị na-esite na akwụkwọ nchịkọta ndị isi obodo na-akpachara anya nwere ike ime ka ndị na-elekọta ụlọ na Drupal nwee mmetụta," ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
N'okwu mmeghe ka camad ga-agafe ma ọ bụrụ na koodu ezighi ezi nke ndị mmadụ nwere ike ịnweta, ndị ahụ na-enweghị nchebe kwesịrị inwe ọnọdụ efu - a ga-akpọsa ya na ọha na eze. Ọzọkwa, kpọmkwem na mmetụta ahụ dịgasị iche iche site na weebụsaịtị na weebụsaịtị, na-adabere n'otú a pụrụ isi jiri PHPMailer mee ihe, ọ bụghị ụzọ dị mfe maka webmasters ga-enyere nsogbu ahụ aka n'enweghị nlezianya nyocha.
Na-eche na ha na-eji PHPMailer eme ihe n'ụzọ ziri ezi Na mbụ, koodu nke weebụsaịtị ha, ha kwesịrị ịkwụsị ọbá akwụkwọ nke patchcord kachasị ọhụrụ iji kwalite ngwa ngwa N'otu aka ahụ dịka a gbapụrụ ya. Ha kwesiri imekwu ka ha mara ma ihe ọ bụla maka kọntaktị ha na saịtị, nzaghachi, ndebanye aha, ntinye aha email Ọzọ iche iche na-ezipụ ozi maka enyemaka nke nsụgharị na-enweghị nchebe nke PHPMailer Kedu ihe ọzọ na-eche na Ọ ga-eme ka onye na-eziga ozi email nweta ọnọdụ.
Na ha tinye n'ọrụ a umi nchịkwa kpuchie ha kwesịrị n'ihu bolstering jụọ ya enyemaka na ebe nrụọrụ weebụ na ọgụgụ isi ma ọ na-emetụta clinched n'akụkụ ya ndabara ntọlite. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha kwesịrị ibu ịnyịnya ibu ndị ahụ maka ihe ọbụla ọ bụla na ntinye plug-ins nke ọzọ na ha kwesịrị ịmepụta Nakwa nke nwere ike iji PHPMailer n'onwe ha.
Usoro Ntanye 4 | Agile na Scrum Master Certification